သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြေရှင်းနည်းအတွက် Angular Milling Head supply - SEHO
ထောင့်ကြိတ်စက် / ကျွန်တော်တို့ဟာအနှစ် ၃၀ ကျော်အသုံးအများဆုံးစက်တွေရောင်းတဲ့စျေးကွက်မှာရပ်နေခဲ့တယ်။ အသုံးပြုသောစက်များအပြင်ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်မတူကွဲပြားသည့်ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်အမျိုးမျိုးသော Bridge Mills နှင့် Angular Milling Head အမျိုးမျိုးကို ဆက်၍ ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
Home အမျိုးအစား ထောင့်ကြိတ်စက်
၃၃ နှစ်ကျော်ထောင့်ကြိတ်ခွဲစက်၊ အသစ်နှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း - SEHO
SEHO INDUSTRY CO., LTD. ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ ထိုင်ဝမ်အခြေစိုက် Angular Milling Head၊ CNC စက်အသစ်များ၊ ကြိတ်စက်များနှင့်ကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်စက်ပစ္စည်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို Angular Milling Head ၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
Angular ကြိတ်စက်သည်ကြိတ်စက်၊ ဒေါင်လိုက် / အလျားလိုက်စက်လည်ပတ်ရေးစင်တာ၊ ကော်လံနှစ်ထပ်စက်၊ Angular ကြိတ်စက်၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာစက်၏လမ်းညွှန်များကို ပြောင်းလဲ၍ ပိုမို၍ ကွဲပြားခြားနားအောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရိုးရှင်းစေရန်အလို့ငှာအမျိုးမျိုးသောထောင့်ကြိတ်ခွဲစက်များ ၉၀ ဒီဂရီကြိတ်ခွဲစက်၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးကြိတ်ခွဲစက်နှင့်တိုးချဲ့စက်ကြိတ်ခွဲခေါင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါထောင့်ကြိတ်စက်နှင့်အတူစက်သည်နောက်ထပ်စက်တစ်ခုသို့ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပိုပစ္စည်းများကိုမလှည့်ဘဲဘေးဘက်အလုပ်များကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အခြားလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအဆုံးသတ်ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။ angular ကြိတ်စက်သည်ရိုးရာစက်ကိရိယာများထက်ကျော်လွန်ပြီးလုပ်အားကိုသက်သာစေသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ထောင့်ချိုးကြိတ်ခွဲခြင်း ဦး ခေါင်းကို die & မှို၊ လေ၊ အာကာသ၊ စွမ်းအင်၊
Angular ကြိတ်စက်သည်စက်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်ထောက်ဖြစ်သည်။ စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုမပြောင်းလဲဘဲ၎င်းသည်ဒေါင်လိုက်အလျားလိုက်၊ ၅ မျက်နှာ၊ နက်ရှိုင်းသော groove နှင့်မည်သည့်ထောင့်စက်မဆိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေနိုင်သည်။
SEHO angular ကြိတ်ခွဲစက်များမှာ ၉၀ ဒီဂရီခေါင်း၊ Universal Head၊ Extension Head နှင့် Hydraulic Angular Head တို့ပါ ၀ င်သည်။ အမျိုးမျိုးသောထောင့်ကြိတ်ခွဲစက်များသည်သင်၏စက်တိုင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ သင့်လျော်သော angular ကြိတ်စက်ကိုသင်ရွေးချယ်ရန်စိတ်ကူးမရှိပါကသင်၏စက်လိုအပ်ချက်နှင့်စက်အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များပေးပါမည်။
Angular Milling Head ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
၁။ စက်အမျိုးအစား၊ ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်ခြင်း၊ ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်းအပါအ ၀ င်စက်၏အခြေခံအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုပါ။ ကိရိယာအလေးချိန်၊ အရှည်၊ အချင်း၊ ကိရိယာမဂ္ဂဇင်းအမျိုးအစား၊ အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အရာဝတ္ထုအတိုင်းအတာ။
2. max အပါအဝင် angular ကြိတ်ခေါင်း၏သတ်မှတ်ချက်များ, အတည်ပြုပါ။ အမြန်နှုန်း၊ သွင်းအားစုနှင့်ထွက်ပေါက် tapers နှင့် angular ကြိတ်စက်၏အရွယ်အစား။
၃။ သင့်လျော်သော angular ကြိတ်စက်ကိုသင်ရွေးချယ်ရန်စိတ်ကူးမရှိပါကသင်၏စက်လိုအပ်ချက်နှင့်စက်အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များပေးပါမည်။
၁။ ၃ လကျော် angular head ကိုအသုံးမပြုပါက Lub ကိုလိုက်နာပါ။ ဂီယာနှင့် bearing အောက်သို့ပြန်သွားပါ - l re-lub အတွက် sp လည်ပင်းကိုငါးကြိမ်ထက်ပိုပြီးလှည့်ပါ။ ဗိုင်းလိပ်တံကိုဆောင်သော။ using အသုံးမပြုမီရေနံပမာဏကိုစစ်ဆေးပါ။
၂။ သိုလှောင်ထားသည့်အခါဒေါင်လိုက် ဦး တည်ထားပါကထောင့်ချိုးဒေါင်လိုက်ရပ်ထားပါ။
၃။ အနားကွပ်၏မျက်နှာပြင်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်စက်ဗိုင်းလိပ်တံကိုတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ angular ကြိတ်စက်၏အခြမ်းကိုဆက်သွယ်ခြင်း။
၁။ ပေါ့ပါးသည့် angular ကြိတ်ခွဲစက်များ (SM, SL, SER စီးရီး) များကို tool မဂ္ဂဇင်းထဲတွင်နေရာချနိုင်ပြီး၊ စက်၏လည်ပတ်မှုကဲ့သို့စက်လည်ပတ်များကအလိုအလျောက်ညှပ်နိုင်သည်။
2. အလတ်စားနှင့်ကြီးမားသောအရွယ်အစား angular ကြိတ်ခွဲခြင်းခေါင်းများသည်ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာပြီးခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ပုံကိုပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့သည်အလတ်စားနှင့်လေးလံသောအလုပ်ရှများအတွက်သင့်တော်သည်။
၃.၀ ဒီဂရီခေါင်းများသည်လုပ်သားကိုမလှည့်ဘဲဘေးဘက်အလုပ်များကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အလုပ်သမားချွေတာခြင်း၊
4. တစ်လောကလုံး ဦး ခေါင်းများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းထောင့်0မှ± 90 °ချိန်ညှိသည်။ Universal Head ဖြင့်စက်၏ထောင့်နေရာများတွင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်များကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီနိုင်သည်။
5. Extension head သည် spindle ၏အရှည်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။ spindle ၏ OD အချင်းကိုကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်သည်။ နက်ရှိုင်းသော groove စက်အတွက်သင့်တော်သည်ဗိုင်းလိပ်တံနှင့် workpiece အကြားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၆။ SEHO ထောင့်ကြိတ်ခွဲစက်များသည်ရေနံနှင့်ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ပြီး၊
90 ဒီဂရီအလျားလိုက် ဦး ခေါင်း